ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ फागुन २३ गतेदेखि विक्रीमा – उज्यालो खबर
शुक्रबार, फाल्गुण १४, २०७७ | १०:४४:०५ |
काठमाडौं । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले फागुन २३ गतेदेखि सर्वसाधारणमा आईपीओ विक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट फागुन ७ गते आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति पाएको हो ।
बोर्डले कम्पनीलाई रू. ६६ करोड बराबरको ६६ लाख कित्ता आईपीओ विक्री गर्न अनुमति दिएको हो । कुल कित्तामध्ये ५ प्रतिशत दरको ३ लाख ३३ हजार कित्ता कम्पनीको कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत सामूहिक लगानीकोषको लागि सुरक्षित राखी बाँकी ५९ लाख ४० हजार कित्ता सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याउन लागेको हो ।
उक्त आईपीओमा छिटोमा फागुन २८ गते र ढिलोमा चैत ८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । हाल प्राथमिक बजारमा १५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको आवेदन पर्दै आएकोमा छिटो अवधिभित्रै मागभन्दा बढी आवेदन पर्ने देखिन्छ । यो आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ ।
यस कम्पनीले जीवन बीमा कम्पनीहरुले कायम गर्नुपर्ने तोकिएको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब कायम गर्न सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । हाल ७० प्रतिशत संस्थापक तर्फबाट चुक्ता भएको पूँजी रू. १ अर्ब ५४ करोड रहेको कम्पनीको आईपीओ निष्कासन पश्चात चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब २० करोड पुग्नेछ ।
कम्पनीमा संस्थापकतर्फ ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण तर्फ ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व आईपीओ पश्चात कायम हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले रू। १० करोड ७८ लाख ७१ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षको यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. ६ करोड ८९ लाख खुद नाफा गरेको थियो ।
७४ हजार ७०३ बीमालेख कायम रहेको कम्पनीले दोस्रो त्रैमाससम्म रू. ४ करोड ६३ लाख ७३ हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने रू. ३ करोड १ लाख ४७ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको रुपमा २०७४ साल भदौ १९ गतेदेखि कम्पनीले औपचारिक रुपमा कारोबार सुचारु गरेको हो ।